Milkiilayaasha Timeshare ee wadamada amarka UK waxay luminayaan lacag ha safraan ama ha socdeen
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Milkiilayaasha Timeshare ee wadamada amarka UK waxay luminayaan lacag ha safraan ama ha socdeen
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Ammaanka • Wararka Spain • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Socdaalka amber timeshare safarka
Nidaamka iftiinka taraafikada ee dowladda Boqortooyada Ingiriiska wuxuu ku daray Spain iyo Griiga kuwa kale oo ka mid ah dalalkooda amarka UK liis ay ku qoran tahay hingaadda dhibaatada milkiileyaasha waqtiyada ee dalalkaas.
Maaddaama tirtirka liistada amber-ka waddamadu ay u eg yihiin talo-bixin oo aan loo baahnayn sharci, wakiillada socdaalka iyo shirkadaha waxay ku dhexjiraan xuquuqdooda inay diidaan soo-celinta, dhibcaha, iyo is-beddelka safarka.
Filashooyinka ayaa ahaa in safarka uu noqon doono mid la beddeli karo wuxuu isu beddelay riyo cabsi leh.
“Ikhtiyaarrada” ayaa ah inaad lumiso lacagtii aad bixisay si aad u safarto iyo sidoo kale maalgelinta waqtiga la wadaago ama aad u safarto si kasta oo aad lumiso dakhliga ka soo gala shaqadii aad ku qaadatay go'doominta loo igmaday.
Ka mid noqoshada liiska amber waxay ka dhigan tahay talada rasmiga ah inaysan u safrin meelahaas. Sababtaas awgeed, wakiilo badan oo safar ayaa diidaya inay dib u soo celiyaan ama amaahda milkiilayaasha milkiilayaasha ee sameeyay qorshooyinka safarka laakiin hadda waxay ku xayiran yihiin inay maraan shuruudaha iyo luminta dakhliga maaliyadeed iyo kharashyada safarka ee horay loo bixiyay.
Wixii dalxiisayaasha sida Sandra Norman oo aan dooneynin inay u duulaan dalalka liiska amber, tani waa jahwareer weyn. Sandra ayaa sharraxaad ka bixisay wareysi ay la yeelatay BBC-da in ay ballansatay safar qoys oo muhiim ah oo ay ku tagi lahayd Giriiga sanad ka hor iyadoo rajaynaysa in haddii safarka loo diido ay awood u yeelan karto inay guurto ama joojiso fasaxa. Waxay isku dayday inay u wareejiso ballansashada illaa 2022 laakiin waxay leedahay wakiilka socdaalka ayaa diiday. Normanku waxay halis ugu jiraan inay aadaan wadamada liiska ambaarka ama ay lumaan £ 5000 ee ay bixiyeen.
Ka fogaanshaha waddamada liistada amber maaha shuruud sharci ah, taas oo macnaheedu yahay in shirkadaha ay ku dhexjiraan xuquuqdooda inay diidaan lacag celin ama taariikhda wax laga beddelo.
Xitaa haddii Normans ay geesinimo u tahay halka loo socdo, qodobka kale ee dalxiiska noocaas ah ka dhigaya mid aan macquul aheyn qoyska Sandra ayaa ah in karantiil 10 maalmood ah ay qasab tahay soo noqoshada, iyo sidoo kale baaritaanno qaali ah ee PCR.
Dalxiiska Adduunku wuxuu u baahan yahay caawimaad, Sacuudi Carabiyana ...
Rikoor Codsi Duulimaadyada Diyaaradaha Gaarka Ah Si Aad U Sii Wadato ...
Lufthansa Ma Soo Dhaweynayso Mudanayaal '...
Duulimaadyada cusub ee Jamaica waxay muhiim u yihiin soo kabashada dalxiiska ...